Shanduro yeGoogle: AI inokwanisa kubereka izwi, inzwi uye kunyepa. - PhonAndroid.com - TELES RELAY
HOME » TECH & TELECOM Shanduro yeGoogle: An AI inogona kubereka izwi, inzwi uye kunyepa? - PhonAndroid.com
Shanduro yeGoogle inogona kuva mushanduri wenguva chaiyo pedyo nekukwanisa mumakore anotevera. NeTraducatotron, Google yakagadzira izwi rekuzivikanwa kwekombiyuta inogona kubereka izwi, izwi kana inzwi. Pakupedzisira AI yakasimbisa varoyi nezwi risisi iro robot?
Kutaura nemumwe munhu asingatauri mutauro wako hauna kumbove nyore nyore ne teknolojia, asi zvakanakisisa zvichiri kuuya. Vashanduri vari kuenderera mberi uye Google iri kushanda pamhinduro yekudzorerazve zviitiko zvakatendeka zvakakwanisika kuhutano hwepakutanga. pamusoro blog yake yakatsaurirwa kuna Artificial Intelligence, kambani yeGrace View inopa Translatotron.
Google Translation yakakurumidza kukurudzirwa nezvinhu zvitsva?
Ichi chiitiko-che-chi-chimiro chekuziva mutauro unokwanisa kuongorora, kuziva uye kunyange kutora inzwi, inzwi kana kutaura. Uchibatanidza neGoogle kushandurirwa kushandura shanduro dzekushandura, Translatotron inova mutauriri kuti aswededze pedyo nekusvika kune manzwiro anoita vanhu pavanotaura.
Verenga zvakare: Google Realtime Translation inouya nokukurumidza kune dzose dzeGoogle
Hapanazve izwi rerobhoti uye rakashata iro rinokurumidza kupedza vashanduri venguva chaiyo kana vatsigiri kuitira kuti vagamuchire mazwi, mazwi ekuimba uye kuimba nzwi. Mune ramangwana rekupedzisira, American giant hairongedzeri kusanganisira zvinoreva Translatotron mumutauro weGoogle Translate, kuchine zvakawanda zvekugadzirisa zvinetso zvekugadzirisa. Asi pakufamba kwenguva, isu tinofanira kufanirwa nemhando iyi yekombiki inoita kuti zvive nyore kuti tive nehurukuro yakanaka uye inofadza nemumwe munhu asingatauri mutauro unozivikanwa. Translatotron inoshanda pamwe chete pakati peGoogle Translate, Google Brain neGoogle Speech maqembu.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.phonandroid.com/google-traduction-une-ia-capable-de-traduire-la-voix-le-ton-et-les-accents.html
Liquid Telecom inotanga Hurukuro yeAzure muEast Africa